Kampala:-Waxaa markii bisha ahayd 26/12/2017 lsoo gabagaboobay Mu,tamarkii 9aad ee Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Ugandha gaar ahaan magaalada Kampala ee xarunta dalkaas waxaana lagu qabtay Mu,tamarkii 9aad Markazka weyn ee Al-Tawxiid .
Mu,tamarka oo sanadkii la qabto laba jeer ayaa waxaa ka soo qeyb galay sanadkan Mu,tamarka culimada kala ah.
1. Sheekh Mustafe xaaji Ismaaciil Hargaysa
2. Sheekh Maxamed Idriis Axmed Sacuudiga
3. Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf Garowe
4. Diktoor Xasan Sheekh Cali Warsame Burco
Mu,tamarka oo sanadkan halkudhagiisa ahaa
(QABSADA XARIGA ILAAHEEY ADINKOO WADAJIRA HANA KALATEGINA) Ayaa waxaa ka baxay muxaadaraad kala duwan oo gaaraayay 13 muxaadaro qaarkoodna ka baxay masjidka Towxiid qaarkoodna ka baxay Hoolka Jaamacadda KIU
Muxaadaraadka inta ay socdeen ayaa waxay culimada ka jawaabeen su,aalo aad u babadan ayadoo ay muxaadaraadkaa ay ka faa,iidaysteen boqolaal jaaliyadda soomaalida ee isugu jiray rag iyo dumar, waxaa sidoo kale si gaar ah uga faa,iidaystay culimada Ardayda jaamacadaha oo muxaadaraad gaar ah loo sameeyay.
Mu,tamarka oo furmay 23/12/2017 Ayaa socday Afar maalmood iyo habeenadooda ayaa waxaa loo qabtay xaflad furitaan oo balaaran oo ka dhacday masjidka, culimadana waxaa lagu soo dhaweeyay gabayo iyo hadalo aad u qiima badan waxaana soo dhawaynta qayb ka ahaa ardayda madaarista ee kampala, waxaana si rasmi ah culimada u soo dhaweeyay Sheekh Maxamed Cabdiweli oo ah imaamka iyo Sheekha Markaska towxiid.
Ugu danbaystii Waxaa ka soo baxay mu,tamarka bayaan laga soo jeediyay mu,tamarka habeenkii uu soo gabagaboobay ee xalay ahaa 26/12/2017 Bayaankaa oo lagu soo koobay culimada mawaadiicda ay ka hadleen iyo dardaarankii culimada.
Waxaana duco ku soo gabagabeeyay mu,tamarka Sheekh muxamed idriis oo ka mid ahaa culimada mu,tamarka qaybta ka ahayd